Hery Rajaonarimapianina : “ Maro ny ezaka vita nandritra iny taona 2017 iny “ -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimapianina : “ Maro ny ezaka vita nandritra iny taona 2017 iny “
Anisan ‘ny fotoana hijiery todika ny zava bita ny faran ‘ny taona tahaka izao ary anisan ‘ny nanatanteraka izany ny filoham-pirenena, izay nitanisa ny asa vita nandritra ny 12 volana. Ny taona 2017 dia fotoana iray nandalovana loza voajanahary toy ny rivo-doza Enawo sy hain-tany izay, niompanan ‘ny ezaka ny fitondram-panjakana ny nanarina ny vokatr’ireo loza vohajanahary ireo. Nitarika fahasahiranana teto amin’ ny firenena tokoa ireo loza vohajanahary roa ireo , indrindra ny lafiny fambolena. Tazana ohatra tamin’ izany ny fihenenan’ny voka- bary, sy ny fiakaran’ ny vidim-bary ihany koa teo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena.Noho izany dia voatery nanafatra vary hatrany amin’ ny 5 hetsy taonina. Io ihany koa izay nanery ireo mpamogady ampidina ny vidim-bary hatram’ ny fotoam-pabolena manaraka.
Ho an ‘ny taona 2017, dia vaoatazon’ i Madagasikara ihany koa ny tahan ‘ny harin-karena ho 4,1 %. Araka ny tombana izay nataon’ ny gouvernemanta, dia tokony hikatra hatrany amin’ ny 5,1% izany ho an’ ny taona 2018. Nanamafy hatrany moa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fotoam-bita fa tsy ho hita haingana anatin’ ny vilan’ ny Malagasy io fiakarana io, saingy teo kosa ny fandresana ara-ekonomika teto amin’ ny firenena. Noho izany hoy ny filoha dia tsy hitsahatra amin’ io ezaka vitany io ny gouvernemanta. Ny fanitsiana ireo lalàna maro samy hafa ihany koa dia nahafahana nampitombo ny vokatra sy ny asa amin’ ny famokarana eto amin’ ny firenena.
Anisan ‘ny tazan ‘ireo mpamatsy vola ihany koa ny ezaka izay vitan’ i Madagasikara hoy ny filoham-pirenena Hery Rajanaorimampianina , ary izay dia noporofoin’ izy ireo tamin’ ny halalan’ny famoham-bola hafahana manampy amin’ ny fampandrosoana. Anisan’ny nahita izany ohatra ny FMI, banky iraisam-pirenena, banky afrikanina ho an ‘ny fampandrosoana ary ny vondrona eropeanina.
Asa vita 2017
Ansian’ ny ezaka vita ihany koa nandritra ny taona 2017 ny famahana ny olana nisy tamin’ ireo orinasam-panjakana, izay nasiana fanitsiana. Teo ihany koa ny fifanarahana tamin’ ny Air Madagascar sy ny Air Austral , izay nahafahana nanatsarana ny fitanterana hanabakabaka sy ny lafiny fizahan-tany eto amin’ ny nosy Malagasy. Tafiditra amin’ izay fitanterana hanabakabaka izay ihany dia teo ny fanatsarana sy ny fanitarana ireo seranam-piara manidina etsy Ivato sy Nosy-be izay mizotra arak any tokony ho izy ny asa amin’ izao.
Anisan ‘ny tanjona ‘ny filoham-pirenena Hery Rajaoanrimampianina sy ny gouvernemanta miaraka aminy ny fametrahana hatrany fotodrafitr’asa izay mijery lavitra sy mampandroso ny firenena Malagasy. Izany ihany koa no vita dia vokatry ny fiaraha miasa amin’ ny sehatra tsy miankina, ary nahafahana nanatontosa fanokanana ireo zava bita maro isan-karazany ny taona 2017. Anisan ‘izany ohatra ny tsena maoderina ao Moramanga sy ny fiatsonana goavana etsy Andohatapenaka.
Tsy ho adino amin’ izany asa vita izany ihany koa ny famatsiana jiro eny amin’ ny tontolo ambany vohitra, izay tena asa hiompanan ‘ny filoham-pirenena. Tsihahivina ohatra ny toby mpamokaran-jiro izay afaka mamokatra 22 megawatts tao Farahantsana. Tsy adino ihany koa ny tao Mahaboka, sakaraha, st augustin ary ny tao amin’ ny distrikan’ i Toliara faha roa. Ny fahavitan’ ireo foto-drafitr’asa ireo ihany koa dia nahafahana nanena ny fanampiana izay homena ny JIRAMA ary mampihena ny fahatapahan-jiro amin’ ireo tanan-dehibe.
Eo amin’ ny lafiny ara-diplaomatika, dia afaka hanitatra ny seranan-tsabon’ i Toamasina isika izao hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, izay hiaraha miasa amin’ ny firenena Japonais. Ny fiaraha miasa tamin’ ny vondrona eropeanina izay nahafahana ihany koa namita ny lalana mampitohy an’Ambanja-Antsiranana sy Ihosy hatrany Taolagnaro. Ireo asa ireo izay hanomboka ny taona ho avy.
Eo amin’ ny lafiny fambolena kosa indray , dia hafaka nanatanteraka fametrahana ny vato fototra amin’ ny tohan-drano miisa 5 ny gouvernemanta any amin’ ny faritra Menabe sy Melaka izay hafahana manondraka tanim-bary hatrany amin’ ny 6 400 ha.
Teo amin’ ny lafiny ara-tsosialy kosa indray dia mitohy hatrany ny fanampihana izay ataon’ ny filoham-pirenena ho an ‘ireo tena sahirana amin’ ny halalan’ ny tetik’asa ‘’Vatsin’ankohonana’’ .” anisan ‘ny ezaka nataon-tsika ny fametrahana ireo fotodrafitr’asa sosialytahaka ny sekoly sy ny hopitaly” hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fotoam-bita. Na dia teo aza ny fitanisana ireo zava bita maro ireo dia mbola nilaza ny filoham-pirenena fa mbola maro ny ezaka izay ho tanterahina amin’ ny taona 2018. Nilaza noho izany ny filoha fa “ amin’ izao fotoana izao isika dia mandeha amin’ ny tena fametrahana ny famarinan-toerana ara ekonomika ary efa hita avokoa ny olana amin’ ny fampandrosoana ny firenentsika”.
Notokanana omaly, ny zaridainan’Anosy sy Mahamasina amin’ny endriny vaovao. Tonga nanolotra izany ho an’ny vahoaka sy ny mponin’Antananarivo ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina. Tamin’izany indrindra no nilazany nandritra ny lahateny nataony fa endriky ny Fisandratana ...Tohiny